Malunga nathi -I-Shengde Nxiba izinto ezinganyangekiyo kwi-CO., Ltd.
Yasekwa ngo-1970, Shuangfeng SHENGDEunxibe izinto ezinganyangekiyo i-Co, Ltd ngumenzi wobuchwephesha bezinto ezahlukeneyo ezinokuthwala imanganese. Ezifana umhlathi isityumzi ipleyiti, cone isityumzi banxibe inxenye, ifuthe isityumzi isinxibo banxibe inxalenye, isando isityumzi banxibe inxenye.
Ifunyanwa e Shuangfeng, Hunan, Shengde ibandakanya indawo ye-9000 yeemitha, kunye nabasebenzi abangaphezu kwama-200 kuquka abasebenzi abangaphezulu kwama-20 abaqeqeshiweyo nezobugcisa. U-Shengde sele efumene i-National Special License License, unokuvelisa i-ZGMn13Cr2, eyona ndawo inxibe kakhulu yezixhobo zemveliso ezahlukeneyo ezifayilishwe njengam, isinyithi, igrabile, udongwe.
Ukunceda abathengi bethu ukuba banciphise iindleko ngelixa behlangabezana neemfuno ezingqongqo zoluhlu olubanzi lweemveliso, ukuphucula ukhuphiswano lweemveliso kwimarike, ukufezekisa inzuzo efanayo kunye nophuhliso oluzinzileyo kunye.
Imveliso yethu yonyaka idlula iitoni ezingama-25,000, kwaye imveliso yethu kunye nomthamo wentengiso sikwisikhundla esiphambili koogxa basekhaya nasentshona.Ngaphezulu kweminyaka engama-40, siphumelele abathengi bethu kulo lonke ilizwe nakwiimarike zamazwe onke sixhomekeke kumgangatho wethu ophezulu -imveliso esemgangathweni, ngakumbi i-United States, Canada, Britain, Germany, Netherlands, Sweden, Australia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Japan, Brazil kunye namanye amazwe. kwaye ngokulandelelana sibe ngumthengisi wezincedisi ezikumgangatho ophezulu kumashishini amakhulu awaziwayo eNgilane, eJamani njlnjl. Siyaluqonda uphuhliso, sihambelane neemfuno zeshishini ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi kwaye sihlala sifuna amanyathelo amatsha ngokubambelela kumgaqo "wokukhokela kwimizi-mveliso, ukuthembeka-okokuqala, ubuvulindlela kunye nokuyila". Ngo-2011, siye sazisa i-V-casting umgca we-V-casting-friendly-high-tech, eyenza inkampani yethu iphumelele kwi-teknoloji, izixhobo, amandla okuvelisa, umgangatho kunye nenkonzo.